Nintendo Chinja inova yeLinux piritsi yekutenda kuFail0verflow | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura, iro rakakurumbira hacker boka Fail0verflow rakazadzisa chinangwa chakange chisingafungidzirwe kuti chingagone, chakazadzikiswa gadza Debian pane iyo Nintendo Chinja nekuda kwekunetsekana kwavakawana ivo pachavo muzvikamu zvakareba zvekutsvaga.
Mune zvinyorwa zvavo pamusoro pekubira, iro rekubira rakataura izvozvo kushandisa kwavakawana hakugone kugadziriswa naNintendo kuburikidza neyekuvandudza firmware nekuti iguru mubhuti reROM. Uku kunetseka kwakabvumidza kuiswa uye kushandiswa kweyakajairika Debian Linux kugovera.
Nintendo Chinja inomhanya sehwendefa neLinux
Pakupera kwevhiki, mazuva mushure mekuzivisa kwekutanga, fail0verflow yakati kuburikidza neTwitter kuti vakaenda kusvika iyo Nintendo switchch Hardware yakavabvumidza, uchishandisa KDE Plasma desktop kushandura iyo console kuita Linux piritsi.
Muvhidhiyo yakatumirwa pasocial network unogona kuona iyo Nintendo Chinja ichimhanya KDE Plasma ichibvumira mushandisi kugadzirisa kupenya kwechidzitiro, zoom nemaoko, pamwe nekupurinta uye kunyora zvinyorwa pachiratidziri.
Kodhi kuitisa kwese kutsamwa mazuva ano, asi Chinjana chako chingaite * izvi *? ;-) #switchnix pic.twitter.com/NMnBq61tOM
- fail0verflow (@ fail0verflow) Kukadzi 17 kubva ku2018
Kunyangwe izvi zvese zvichinzwika zvakanaka kune avo vari kutsvaga piritsi reLinux, usamhanye kutora Nintendo Shandura, iro boka harina kuburitsa chero ruzivo rwekuti vakakwanisa sei kuisa Linux paconsole. Fail0verflow yanga ichishanda zvakanyanya makore apfuura uye pamwe kugona kwake kukuru kwave kuri 'kubira' iyo PlayStation 4 uye woishandura paunoda.
Kusvikira Fail0verflow yasarudza kutidzidzisa maitiro ekuisa Linux uye KDE Plasma paNintendo Shanduko, kuyedza hakugone kubudiswazve. Chero nzira, uku ndiko kubudirira kukuru kune yemahara software nharaunda. Muvhidhiyo iri pamusoro iwe unogona kuona kushanda kweNintendo switchch 'yakaburitswa'.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Nintendo Chinja inova piritsi reLinux nekuda kweFail0verflow
Yakanaka kwazvo, kunyange ichiratidzika kwandiri kunge BSD uye kwete linux
Isa Chromecast kubva kuLinux